२०८५बाट काठमाडौंसहित चितवन र हेटौंडामा तेलबाट चल्ने गाडीमाथि प्रतिबन्ध ! ::Nepali TV
You are here : Home News २०८५बाट काठमाडौंसहित चितवन र हेटौंडामा तेलबाट चल्ने गाडीमाथि प्रतिबन्ध !
२०८५बाट काठमाडौंसहित चितवन र हेटौंडामा तेलबाट चल्ने गाडीमाथि प्रतिबन्ध !
हेटाैंडा । प्रदेश नं. ३ को सरकारले अागामी ०८५देखि काठमाडौं उपत्यका, चितवन, हेटौंडा, बनेपा, धुलिखेल र पनौतिमा पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सवारी साधनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने योजना अघि सारेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममार्फत ब्यापक रुपमा विद्युतीय सवारीको प्रयोगमार्फत तेलबाट चल्ने चल्ने गाडीको प्रयोगमा प्रतिवन्ध लगाउने योजना अघि सारिएको हो ।